यसपटक इन्टिग्रेटी अफिसरको व्यवस्था छ - पाँच प्रश्न - साप्ताहिक
सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन लिगका निर्देशक हुन् सञ्जीव मिश्र । नेपाली फुटबलसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिंदै आएका मिश्रले यसपटकको लिग सुरु गर्न पर्याप्त गृहकार्य गरेका छन् । लिगमा केन्द्रित रहेर सञ्जीवसँग साप्ताहिकको पाँच प्रश्न :
लिगमा रेलिगेसन नभएको स्थितिमा पुछारमा रहेका क्लबविरुद्ध कस्तो नियम छ ?
सहभागीमध्ये अन्तिम दुई स्थानमा रहने टिमलाई दण्डको व्यवस्था गरेका छौं । १३ औं स्थानको टिमले अर्को लिगमा एक अंक गुमाएर खेल्नेछ भने उसमाथि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिनेछ । यस्तै १४ औं स्थानमा रहने टिमले दुई अंक गुमाउनेछ भने तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नेछ ।
के यसले रेलिगेसनको विकल्पका रूपमा काम गर्छ त ?
पक्कै पनि । यसपटक कुनै टिम रेलिगेसनमा पर्ने छैनन्, तर त्यसको विकल्पमा आएको नियमले खेललाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने छ । यो नियमले लिग वास्तविक लिग जस्तो देखिनेछ । टिममा अहिले नै अंक घट्ने डर देखिएको छ ।
खेल मिलोमतोलाई रोक्न के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
हरेक खेलमा विजेताले ५० हजार रुपैयाँ पाउने छ भने बराबरीमा १५/१५ हजार । यसले पनि टिमलाई जितका लागि खेल्न प्रेरित गर्नेछ । यसपटकदेखि हामीले इन्टिग्रेटी अफिसरको व्यवस्था गरेका छौं । तिनले सबै क्लबलाई खेल मिलोमतोका बेफाइदाका सम्बन्धमा जानकारी दिएका छन् । एसियाली फुटबल महासंघका इन्टिग्रेटी अफिसरले पनि यस विषयमा आफ्नो धारण क्लबसामु राखेका छन् ।
के यसले खेल मिलोमतो रोक्छ ?
हामी शतप्रतिशत खेल मिलोमतो रोक्ने दाबी त गर्दैनौं, तर यसले खेल मिलोमतो न्युनिकरण भने पक्कै गर्छ । खेलाडी र प्रशिक्षकले प्रत्यक्ष देख्ने स्थान, जस्तै ड्ेरसिङ रुममा सन्देश राखेका छौं । रेफ्रीसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका छौं । चेतना फैलाउने काममा कुनै कन्ज्युसाइ गरेका छैनौं । खेल मिलोमतोमा शून्य सहनसिलता हुने र यसमा मुछिए आजीवन प्रतिबन्ध हुने सन्देश दिएका छौं ।
प्रतियोगिताको ट्रफि टुरको प्रभाव कस्तो रह्यो ?
यसपटक नयाँ कार्यका रूपमा लिगको ट्रफी टुर पनि सम्पन्न गरियो । यसले लिगका सम्बन्धमा सर्वसाधारणमा जानकारी बढेको छ । लिगको ट्रफि कस्तो छ, त्यो सबैले देख्न पाए । लिगको ट्रफि केही पुरानो भएको छ, यसमा मर्मत आवश्यक छ । यसपटक हामीले यसमा पनि ध्यान दिएका छौं ।